Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FC Ifeanyi Ubah si Nigeria & ụwa | TAA
SystemSpecs: Anyị ga-akwalite mmasị Naijiria na nzuko US
NPHCDA: Naijiria chọrọ N824 ijeri ịzụta vaccines n'elu 10 ọzọ ...
Ndị agha gburu mmadụ Boko Haram, jidere onye ọzọ na Borno
NAGAFF chọrọ ịlaghachi SON gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri
Kemi Adeosun: Ụgwọ ụgwọ nke Naijiria na-achịkwa
Obodo ndị Lagos na-achọ ike ọkọnọ ike
MTN ka ichota ndi ozo ka ha na aru oru na Naijiria IPO
Ivan Gazidis: Arsenal ga-enwe obi ike n'ọchịchọ njikwa ọhụrụ
Alex Ferguson na-ebute otuto nke Arsene Wenger na Arsenal
Didier Drogba hails Mo Salah mgbe ha merisịrị ndekọ Njikọ Premier ya
Mgbagwoju anya PDP ka o guzobe ulo mkpochi
Home Tags FC Ifeanyi Ubah
Eze Stephen Eze nwere obi ụtọ iji merie mmalite na Bulgaria
CHAN Super Eagles defender Stephen Eze nwere obi ụtọ na ya na mbụ ya maka Lwomotiv Plovdiv Ligue Milan Bulgarian Premier taa.
Plateau, Akwa United nwere nnukwu mmeri
Ndị na-agba ọsọ n'ihu na Nigeria Professional Football League, Plateau United na Akwa United, ha abụọ nwetara nnukwu mmeri n'ọgba egwuregwu ha megide Sunshine Stars na Wikki Tourist na Sunday.
NPFL: Akwa United na-agba Kwara United aka n'elu tebụl
Akwa United bụ ndị ndú ọhụrụ nke NPFL mgbe ha merụrụ Kwara United 3-0 n'ụlọ na ndị mmeri Plateau United, Lobi Stars na Wikki Tourists niile na-achụ mkpọ.
MFM FC na-ahazi onye njikwa ọhụrụ, onyeisi nke nlekota
Njikwa nke MFM FC ahọpụta Geoffrey Aghogi ka ọ bụrụ onye njikwa ọhụrụ na onye isi nlekota na ntorobịa.
Lobi Stars kwuru na njikere maka 2017 / 18 League - Mike Idoko
Mr Mike Idoko, onye isi oche nke onye isi oche nke Lobi Stars Football Club gosipụtara na njikere maka otu 2017 / 2018 Nigeria Professional Football League (NPFL) Oge a ga-amalite Jan. 14, 2018.
CHAN 2018: Egwuregwu Super Eagles bụ Ikechukwu Ezenwa
Ikechukwu Ezenwa, onye na-eche nche nke Super Eagles, kwuru na otu ndi Naijiria ga-agbasi ike ime ka mmeri ndi mmeri ya na 2014 African Nations Championship (CHAN).
Ifeanyi Ubah meere Ladan Bosso dịka onye nhazi ndụmọdụ
FC Ifeanyi Ubah ekwuputala Ladan Bosso dị ka onye na-ahụ maka ndị ọrụ nchịkwa nke Njikọ Ngwá Ọrụ Nigeria na-aga n'ihu mgbasa ozi oge ọhụrụ ha.
Enweghị uwe akpaka maka Vincent Enyeama - Gernot Rohr
Onye nchịkwa nke Super Eagles nke Nigeria, Gernot Rohr, ewepụtara oge ịkọwa otú agha maka ebe mbụ kachasị mma nke Super Eagles ga-adị ka ịgbaso nlọghachi dị nso nke onye nlekọta mgbaru ọsọ mbụ bụ Vincent Enyeama.
Raphael Everton nke Brazil ahazi aha njikwa ọhụrụ Abia
Ndị agha Bekee nke Abia na-ekpughe Raphael Everton dị ka onye nlekọta ọhụrụ ha.
Gọvanọ Sani Bello na-ebubo Niger Tornadoes ịga maka aha AITEO Cup
Gọvanọ Niger State, Alhaji Abubakar Sani-Bello, ebuola ndị Niger Tornadoes ka ha gaa iko ahụ ka ha na-aga A CupO Cup na Sunday na Akwa United FC.
Ezenwa na-anọchite anya Eagles nke anọ - Rohr
Onye isi nchịkwa nke Super Eagles, Gernot Rohr, kwuru na Vincent Enyeama ka otu onye na-eche nche.
Plateau kpoo MFM iji gbasaa ndu na nzuko NPFL
Plateau United meriri MFM FC 1-0 iji gbasaa isi ha na tebụl Nigeria Football Football na ụbọchị 34.
Davido: M ga-adaba nnukwu abụ na Nigeria na April 30
Davido na-ekwu na ọbịbịa ya nke a ga-ahapụ na April 30 ga-abụ "nnukwu abụ na mba".
SystemSpecs, ihe nkwụnye ụgwọ nkwụnye ego nke Nigeria, ka a gosipụtara ya na nkà na ụzụ ego ya na nsonso ego ego 2018 US-Nigeria.
Arsenal kwesiri ịbụ "ndi nwere obi ike, ndi obi ike na ndi obi ike" na nchuta ha iji dochie anya Arsene Wenger dika onye nchikota, ka onye isi oru bu Ivan Gazidis kwuru.
NPHCDA: Naijiria chọrọ N824 ijeri ịzụta ọgwụ ndị ọzọ na-esote afọ 10 ọzọ
Naijiria chọrọ ihe ruru $ 2.7 (N824 ijeri) ịzụta ọgwụ mgbochi maka afọ 10 sochirinụ iji mee ka o mezuo nje 84 pasent nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa site na 2028, National National Health Care Development Agency (NPHCDA) kwuru.
Nkwado NBA na-akwado maka imegide nrụrụ aka, nchebe
Ụlọ ọrụ Bar Association, Barnawa alaka ụlọ ọrụ, Kaduna, akpọwo ndị òtù ya ka ha soro gọọmenti na-emekọrịta ihe iji kwado ihe ngwọta maka mmejọ ọjọọ ndị na-eme ka ha ghara ime udo na mba.
Nchịkọta ntuli aka nke Nigeria: Ọchịchị siri ike, usoro nchịkwa
Ndị maara onyinye nke Festus Okoye dị ka Executive Director, Human Rights Monitor na usoro nhoputa ndi ochichi anyi nwere ike jara ya mma n'azu gara aga dika otu n'ime ndi nlekota nke National Independent National Electoral Commission (INEC). Ọ bụ Okoye nke ruru eru ịchọta ụlọ ọrụ kachasị elu na INEC.
Ihe mere Donald Trump ji kpọọ Buhari Nigeria na White House
President Muhammadu Buhari nke Naijiria ga-ezute Donald Trump na Washington na April 30 iji kwurịta nsogbu ndị gụnyere "ịlụ ọgụ na iyi ọha egwu" na ọganihu akụ na ụba, White House kwupụtara na Sunday.
Gọvanọ nwere ike ịrụ ọrụ 34 maka akara ụbọchị 3rd
Ọchịchị Rivers State kwuru na Fraịdee na ọ bụ ọrụ 34 maka ntinye aka maka akara akara Gov. Nyesom Wike's 3rd anniversary celebration.
President Tanzanian John Magufuli na-eme ka ndị isi na-enweghị ike icheta mmefu ego ...
Otu na-atụ egwu na ndị nwụrụ anwụ, ọtụtụ ndị merụrụ ahụ, ụlọ gbagburu na Kogi nsogbu obodo
Buhari nloghachi: Ahu m n'anya Naijiria Agaghi m agha ugha
Echere m: Amalitere m ịkpọrọ m iji lekọta ezinụlọ m
Wolverhampton Wanderers kwalitere na Premier League
Manchester City mee Pep Guardiola mana njikwa kachasị elu n'ụwa